बेला न कुबेला गुटको भेला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आउन अझै दुई वर्ष बाँकी छ । विधानमा हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने र बढीमा ६ महिना थप्न पाउने उल्लेख छ । समय थपको सुविधा लिँदा त झन् अढाइ वर्ष समय बाँकी नै छ । तर, अहिलेबाटै आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर गुट भेला सुरु भइसकेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई लथालिंग बनाएको र आफैं पनि निरंकुश बन्दै गएको निचोडसहित संस्थापनविरोधी गुट भेलाको सक्रियता कोइराला परिवारले बढाएको हो । सुरुमा कांग्रेस राजनीतिको केन्द्रमा रहेका कोइराला परिवारका तीन पात्र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला बसेर देउवाविरोधी मोर्चाबन्दीको सुरुवात गरेका हुन् । उनीहरूबीच आगामी महाधिवेशनमा आफूहरू तीन जनामध्ये एक जनाले पार्टी सभापति लड्ने भित्री सहमति गरे पनि को लड्ने भन्ने विषय अहिले नै सार्वाजनिक नगर्ने भद्र सहमति भएको थियो । त्यसयता सुजाताले देउवाविरोधी मोर्चाबन्दीको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगेकी छन् । त्यहीक्रममा केही समयअघि उनले आफ्नै निवासमा कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहलाई अलगअलग भेटेर संस्थापनविरोधी मोर्चाबन्दी कसिलो बन्दै गएको जनाउ दिएकी थिइन् ।
यही क्रममा सोमबार फेरि माण्डिखाटारस्थित आफ्नै निवासमा सुजाताले ६ नेतालाई लन्चसहित भेला गरिन् । तीन कोइरालाबाहेक रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीसहितको सो भेलाले देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई बलियो बनाउँदै लैजाने र आगामी महाधिवेशनमा उनको विकल्पलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने सहमति गरेको बुझिएको छ । ६ जनाको भेलाले पनि अहिलेलाई कसको नेतृत्वलाई देउवाको विकल्पका रूपमा उभ्याउने अहिल्यै छलफल नगर्ने, समय आएपछि सहमतिमा नेतृत्वको विकल्प अगाडी सार्ने सहमति गरेको बुझिएको छ । तीन घण्टा चलेको छलफलमा महाधिवेशनसम्म पूर्वसंस्थापन पक्ष एक भएर जानुपर्ने साझा धारणा बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवन, सरकारको भूमिका, अन्योलपूर्ण नेविसंघको महासमिति बैठकलगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
भेलामा आगामी २ मंसिरबाट समय सकिन लागेकाले नेविसंघको अन्योलबारे पनि छलफल भएको थियो । यसअघि नेविसंघले नै विधान बनाउँदाको अवस्थामा भएको प्रक्रियाबारे केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले भेलालाई जानकारी गराएका थिए । नेविसंघका विषयमा सभापतिको अबको रणनीति हेरेर प्रस्तुत हुने तयारी पूर्वसंस्थापनको छ । त्यस्तै, सभापति देउवाले विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्दा प्रक्रिया मिचेको पनि यो पक्षको ठहर छ । पूर्वसहमतिअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनैपर्ने भए पनि विधान संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्रक्रिया नपु¥याई मनोनीत गरिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । पौडेल, सिंह र केसीले गच्छदारको मनोनयनको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । विधानमा एउटा मात्र उपसभापति हुने व्यवस्था भएको र पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट मात्रै गर्नुपर्ने भए पनि बाधा अड्काउ नफुकाईकन सभापतिले मनोनीत गर्दा विधानको धज्जी उडेको उनीहरूको भनाइ थियो ।